Mamerina entam-barotra any China ny FBA, serivisy fanodinana trano any Sina - YiXing International Logistics (GuangDong) CO., LTD
YiXing Global logistics Co.Ltd. manana mihoatra ny 4.000 metatra toradroa ny trano fitahirizana, isan'andro dia mihoatra ny 100.000 ny entana ao anaty trano fitehirizana, iray volana mihoatra ny 300.000 baiko ny entana, etsy ambony dia zoro kely amin'ny sary mampiseho trano fitehirizana. Afaka manome mpanjifa amin'ny fitahirizana entana sy fitahirizana entana any Shina izahay, mamerina entana hiverina any Chine sy serivisy hafa.
Fantatry ny mpivarotra Amazon ve ny antony hiverenan'ny vokatra sy hanovana ny marika, ary ny fomba hiatrehana ny baiko naverina amin'ny FBA?
Antony mahatonga ny mpivarotra Amazon FBA hamerina entana hanova marika:
1. Ny fitarainan'ny mpanjifa sy ny fijerena ratsy dia nikatona ho mandrakizay ny kaonty.
2. Ny fanamarinana ny lisitra dia tsy mendrika.
3. Nakatona ny entana tafiditra tamin'ny marika fakana tahaka, fanitsakitsahana, ka nahatonga ny kaonty.
4. Ny fonosana vokatra dia simba ary tsy azo idirana ao amin'ny FBA ho vokatra vaovao.
5. Raha nakatona na mimenomenona ny kaonty dia soloy ny kaonty vaovao amidy.
6. Ny volan'ny kaonty A dia tsy tsara, ka mila manolo ny kaonty B avo lenta amin'ny varotra isika.
7. Aorian'ny fandefasana an-trano dia tsy azo amidy ny lesoka marika, mila averina natahorana indray.
Ny fomba marina hiatrehana ny fiverenan'ny FBA dia mizara ho toe-javatra roa:
Ny karazany voalohany: nahazo ny entana ny mpividy:
1. Ho an'ny olana miverina ateraky ny kaomandy FBA dia haverina any amin'ny trano fitehirizam-bokatra FBA ny entana ary hiatrika izany ny FBA. Ny mpivarotra dia afaka mifandray amin'ny FBA mba hitondra ny entana hiverina any amin'ny trano fitehirizam-bokatra, ary ny fandoavam-bola dia halamina aorian'ny miverina ny entana ny mpividy.
2. Raha tsy simba ireo entana naverina dia azonao atao ny mifandray amin'i Amazon mba hametahana azy ireo hamidy. Raha simba izy ireo dia hampahatsiahy anao i Amazon fa tsy azo amidy intsony ny vokatra.
Azonao atao ny mangataka amin'i Amazon mba hamotika azy, na angataho amin'ny orinasa fanatobiana entana any ivelany ny antoko fahatelo mba halefa any Chine, na angataho amin'ny orinasa fanatobiana entana any ivelany ny antoko fahatelo izay afaka manome serivisy fanamboarana sy fiverenana hitantana azy ho anao.
Karazana faharoa: tsy nahazo ny entana ny mpividy:
1. Raha ny entanao any amin'ny mpandefa izay tsy namoaka tamin'ny fomba ofisialy, dia afaka mampihena ny fihenan-kery, amin'ny mpividy ho an'ny fanodinana vola feno.
2. Raha nandefa ny entana nanapaka tsy hiverina ianao, izay milaza fa mifampiraharaha amin'ny mpividy ianao, nilaza fa efa nalefa izao ny entana, rehefa miandry ny fahazoan'ny mpividy ny entana, jereo fa tsy te-hanapa-kevitra intsony dia ny tsy fanaovana ny entana.
3. Raha mbola tsy manaiky ny mpividy, dia hifampiraharaha amin'ny entana izao, afaka mihevitra ny vidin'ny vokatra ho azy ireo hifampiraharaha amin'ny mpividy ihany no mamerina ny ampahan'ny vola, omena maimaimpoana ny mpividy, mba hampihenana Rehefa sendra ny olan'ny FBA miverina ianao dia tokony hiala sasatra ny sainao ary miezaha mitady izay fara herinao hitady fomba hampihenana ny fahaverezanao ary hampitony ny fihetsem-pon'ny mpivarotra.